High Voltage Insulators China Manufacturers & Suppliers & Factory
High Voltage Insulators - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-High Voltage Insulators)
Ukwesekwa Okuphezulu Kwe-Ceramic Metallised High
Ukwesekwa Okuphezulu Kwe-Ceramic Metallised High Njengoba sikwazi ukuklama isikhunta, sikwazi ukukhiqiza izinhlobonhlobo zezinto ze-ceramic ezinzima. Ngokuphathelene namakhasimende ethu nge-ceramic ekudingeni izingosi zensimbi, kulula ukufeza izidingo zabo ezikhethekile ekuboniseni ukukhiqiza okuningi. Uhlobo...
I-Ceramic Insulator yama-Ultra-High Frequency Electron Tubes
I-Jinghui inikeza izinto eziningi zokufakelwa izakhi ze-ceramic zensimbi eziningi, zonke lezi zici zensimbi zensimbi zilungele ukusetshenziswa ku-vacuum high, zamanje zamanje, ukuphakama kwamandla aphakeme nokucindezela okukhulu. Sinikeza amakhemikhali we-metallised ukuze sikhulume ababoshiwe, ithubhu yokukhishwa...
I-High Voltage Vacuum Tube I-Ceramic Tube ye-Electron Tube
I-High Voltage Vacuum Cer Amic Tube ye-Electron Tube Sinikeza izinhlobonhlobo ze-alumina ceramics ezinamathemikhali ezinhlobonhlobo ezisetshenziselwa ukusetshenziselwa ukuphazamiseka kwe-vacuum, amashubhu wegridi yamandla, amashubhu we-x-ray kanye nezicelo ezifanayo lapho kuhlanganiswa khona ama-ceramic-to-metal,...
I-High Current Vacuum I-Ceramic Component
I-High Current Vacuum I-Ceramic Component Ukuze ufinyelele i-ceramic kwensimbi ejoyina isicelo, ukumbozwa kwensimbi kuzosetshenziswa endaweni ecacile ye-ceramic, bese kuthi i-ceramic yensimbi, i-ceramic ku-ceramic ingabhaniswa ndawonye. Sinikeza uhlobo oluthile lwe-metallization nge-metal ensimbi nge-banding,...
I-High Purity Aluminium Oxide Metallized Washer Washer
I-High Purity Aluminium Oxide Metallized Washer Washer Ngokusekelwe ohlelweni lwethu lokukhiqiza oluvuthiwe, singakwazi ukukhiqiza kusuka usayizi obuncane kuya kwesilinganiso esikhulu sosayizi futhi siyakwazi ukufeza uhlobo oluthile lwe-metallization uhlobo engxenyeni ethile ye-ceramic disc ngokunyathelisa kwesikrini,...
Abrasive Resistant High Pure Aluminium Oxide Ceramic Spool
Abrasive Resistant High Pure Aluminium Oxide Ceramic Spool Njengoba i-wire / intambo / i-fiber spool idinga ukugijima ngaphansi kwejubane elijikelezayo, futhi nesicelo sidinga ukuba i-spool ingalimazi ucingo / intambo / fiber. Khona-ke isitsha se-ceramic njengokhetho olulungisiwe olusetshenziswe kumshini othize ngoba...
I-Aluminum ye-Alumina Ceramic Disc for High Diverter Valve
Ngokuphathelene ne-alumina ceramic disc, ngaphezu kokuhlinzekela ubukhulu obuhlukahlukene obuhlukahlukene, futhi sinikeza ukuhlukahluka kwe-disk yokufaka uphawu lwe-ceramic eyenziwe ngezifiso. Zisetshenziselwa kakhulu i-valve valve, i-valve yokugeza, i-valve ye-mixer, ipompo yamanzi, amadivayisi wokulawula...
I-Alumina ceramic spark insulators ye-ignition system
Ngokuzibophezela ngokuqinile kwezinga, sisebenzela ukuhlinzeka izingxenye ezithengayo zezinhlanzi ze-plug ceramic. Lezi zimfutho zesikhwama se-plug zenziwe ngamaphesenti angama-95% e-alumina oxide ceramics, bese zihlanganiswa nengqimba ye-glaze engaphandle. Kungaba ukumelana namandla amakhulu kuze kufike ku-20KV,...
I-High Toughness I-YTZP i-ceramic tube
Kuhlelo olukhethekile, uhlobo olukhethiwe olufakiwe luyadingeka. Siyakwazi ukwakha umthamo wezingxenyeni zangaphakathi nangaphakathi ze-zirconium ceramic tube. I-YTZP i-ceramic tube inezici eziphawulekayo ezakhiweni ezingokwenyama, ezishisayo kunezinye izinto eziphambili ze-ceramic. I-zirconia oxide izinto...
High Precision Alumina Metallized Ceramic Disk
Sinikeza i-disk-ceramic disk-metallized metal-aluminum oxide ceramic disc esetshenziswa ngokusekelwe kumadivaysi okuphazamisa ukuphumula kanye nezicelo ezifanayo lapho kuhlanganiswa khona ama-metal-to-ceramic joints and hermeticity. I-metallization evamile esinikezayo: 1. I-Ceramic base + iMolybdenum (Mo / Mn)...
High Precision Alumina Ring Ceramic Nge-Metallization
High Precision Alumina Ring Ceramic Nge-Metallization I-Jinghui inikeza izindandatho ze-ceramic ezenziwe ngokucacile ezenziwe nge-aluminium oxide ceramics yezempi, yezokwelapha kanye ne-aerospace. Ngokunyathelisa kwesikrini, ukushayela ukushayela nokusebenzisa ikhono lethu kusenza sikwazi ukufaka imetallised...
I-Dielectric High epholile i-Pink Alumina Ceramic Substrates
I-Dielectric High epholile i-Pink Alumina Ceramic Substrates I-Aluminium Oxide, i-Al2O3 iyinhlangano ebalulekile yobunjiniyela. It inikeza inhlanganisela yezakhiwo ezinhle mechanical nezakhiwo zikagesi eziholela ezihlukahlukene izicelo. Njengamanje, senze ukhiqiza umbala we-alumina ceramic cerstric ozikhethela,...
Incazelo: Ukuze wenze amandla okubambisana abe namandla nakakhulu phakathi kwezakhi zensimbi nezakhiwe zensimbi, ezinye izinqubo eziyisibili ezidingekayo, njengokugaya flat kuzo zombili iziphetho, khona-ke kuyoba flatness ekahle kakhulu. Izindandatho ze-ceramic ekhonjiwe kakhulu e-aluminium e-aluminium i-ceramics...
Njengoba i-zirconium oxide bushing isilandela izici ezihlukile: -Ukugqoka kakhulu -Ukuqina kokuqina kwe-corrosion -Ukuphikiswa kwamandla
I-High Voltage Spark Plug Insulator
High Voltage Feedthru Ceramic Insulator
I-High Voltage Ignition Electorde
Sish Sink Ceramic Insulator